Qaramada Midoobey oo markale Warbixin ka soo saartay Xaalada Soomaaliya | Aftahan News
Qaramada Midoobey oo markale Warbixin ka soo saartay Xaalada Soomaaliya
Muqdisho (Aftahannews) – Gollaha Amaanka Qarramada Midoobey ayaa mar kale warbixin ka soo saaray toddobaad gudihii xaalada cakiran ee siyaasadda Soomaaliya, iyaga oo ku baaqay in lagu laabto miiska wada hadallada si loo xaliyo muranka la xidhiidha arrimaha doorashada.
Qoraalka ka soo baxay Golaha Amniga ayaa lagu sheegay in khilaafka dhinaca siyaasada ee Soomaaliya uu dareenka ka weecinayaan dhibaatooyin joogto ah; oo ay ka mid yihiin daadadka, abaaraha, ayaxa, COVID-19, iyo la-dagaalanka halista kooxda Al-Shabaab, oo dhamaantood ka sii darri doona haddii aan si deg deg loo soo afjarin muran siyaasadeedka taagan.
“Xubnaha Golaha Ammaanka waxay hoosta ka xariiqeen in heshiis la gaadho uu muhiim u yahay hanaan kasta oo doorasho in si guul leh loo fuliyo. Waxay xuseen in heshiiska 17-ka September uu yahay aas-aaska kaliya ee ay taageereen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dhammaan dowlad goboleedyada,” ayaa lagu yidhi bayanaka.
Waxaa uu si buuxda u taageeray Goluhu go’aankii Golaha Amniga Midowga Africa uu ku qaadacay muddo korarsiga labada sano ah ee dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Qoraalkan mar kale ka soo baxay Golaha Amaanka Qarramada Midoobay ayaa muujinaya sida uu Goluhu amiyad gaar ah u siinayo xal u helida mashaakilka siyaasadeed ee waqtiga ka taaggan Soomaaliya iyo saamileydu ka heshiiyaan ismariwaaga doorashada ee u dhaxeeya.